China Yakagadzirirwa Dhizaini Yakazara Ruvara Goridhe Foil Runako Pepa Bhokisi Perfume Bhokisi Kugadzira uye Fekitori |SIUMAI
Yakagadzirirwa Dhizaini Yakazara Ruvara Goridhe Foil Runako Pepa Bhokisi Perfume Bhokisi
Kurongedza kwakakosha sei kune pefiyumu?Kubva pakuona kwekuita, kurongedza kune basa rekutakura pfungwa dzevagadziri uye kunhuhwirira kwakanyungudika, nekuzvitumira kunzvimbo dzese dzepasi;padanho rekutengesa, kurongedza zvakare kunotakura mutoro wekutaurirana nevatengi.
Chimiro, zvinhu, uye saizi yekurongedza zvese zviri kuendesa mameseji akasiyana kune vatengi.Pakati pezvinhu zvakasiyana-siyana zvinogona kuonekwa neziso rakashama, "ruvara" inonyanya kukosha.Ruvara runogona kupa vanhu songaniro dzakawanda.Somuenzaniso, paunoona yero, unofunga nezvemichero yakaita semabhanana, mandimu, uye mango;paunoona bhuruu, mifananidzo yakaita segungwa nedenga ichaonekwa;paunoona chitsvuku, iwe uchafunga nezvemifananidzo yakaita semaruva kana marimi.Mavara anotipa manzwiro akasiyana.Panguva imwecheteyo, tinowedzera hunyanzvi hwakasiyana kuburikidza nekudhinda, kungofanana nekunhuhwirira kwepefiyumu kuita kuti pasuru yese izere nematanho.
1. Kurongedza kwega: poly bag / shrink kuputira / mvura proof paper;Isa kana kupatsanura kudzivirira;
2. Yakanakisa K=K kutumira katoni ine marata ane firimu rekuputira;
3. Yakasimba yepurasitiki pallet kurongedza nefirimu kuputira uye bhandi rekurongedza;
4. Dunnage bhegi dziviriro yekututira kurongedza;
5. Yakazara chiratidzo chekutumira;
6. Usapfuure 21kg bhokisi rimwe nerimwe remutakuri;
7. Custom packaging inogamuchirwa.
MOQ Kazhinji 1000pcs, kurongeka kwekuedza ne500pcs kunogamuchirwa
01 Natsiridza zvinhu
Bepa reBrand rinoshandiswa, hapana makona ekucheka, zvese zviwanikwa zvinogona kugadziridzwa zvakasununguka uye kufananidzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakajeka uye yakajeka, uye yakachena mavara.
02 HD kudhinda
Muchina wekudhindisa weKomori wakatorwa kunze kwenyika, inki yemhando yepamusoro-soro ine mapatani akajeka, inosimudzira kusimba kwemufananidzo, uye vashandi vane ruzivo vane vimbiso mbiri yemhando uye kugona.
03 Kugadzirwa kwakanaka
Kumusoro kwechigadzirwa chacho kwakanyorova uye kwakadzikama, kumativi uye makona anobatwa zvachose, uye chigadzirwa chacho chinogadzirwa ne viscose yakasimba.Bata zvigadzirwa nehungwaru uye ita zvinhu zvine hungwaru.
04 Mabasa akasiyana-siyana
Kupisa stamping / UV / embossing uye mamwe maitiro anogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana.Zvitaera zvakasiyana uye zvakatemwa, zvigadzirwa zvakagadziridzwa ndezvako.
SIUMAI kurongedza inotarisa pakupa epamusoro-magumo mapakeji.Isu takatarisana nepakati-kusvika-yepamusoro-yekupedzisira kurongedza kudhinda kwemakore makumi maviri.
Kusvika pamwero mukuru, katoni yekurongedza inoshandisa yakanakisa chimiro uye yakakwirira-yekupedzisira hunyanzvi kubatsira mukushongedza zvigadzirwa uye kugadzirisa kukwikwidza kwezvigadzirwa.Tichifunga nezvemabasa uye maitiro echigadzirwa, dhizaini yekurongedza yakaita basa rakanaka kwazvo mukushambadzira kwemahara.
Vatengi vanongoda kupa chigadzirwa kana dhizaini dhizaini uye yakakosha kugadzirisa zvinodiwa ruzivo.Isu ticharonga vagadziri vehunyanzvi kubatsira vatengi kugadzira ega kurongedza.
Kurongedza Bhokisi Tsananguro
Ipa masevhisi akagadziridzwa.Chero saizi, mhando yebhokisi, hunyanzvi, nezvimwe zvinogona kugadzirwa.
Optional, senge chena kadhibhodhi, pepa rakavharwa, kraft bepa, marata bepa, aluminium foil bepa, yakakosha bepa, nezvimwe.
Kurongedza kwechipo, kurongedza zvematoyi, kurongedza kwezvizorwa, kurongedza chikafu, kutakurwa kwekutakura, kurongedza zvekurapa, shangu uye zvipfeko kurongedza, hutano zvigadzirwa kurongedza, nezvimwe.
Nekuti zvigadzirwa zvemapepa zvinogadzirwa zvakajairwa, zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvaunoda (mapepa maficha, magiramu epepa, rudzi rwebepa, saizi, dhizaini, kudhinda, nezvimwewo).Nekuda kwezvinhu zvakaita sekutemerwa, zvigadzirwa, dhizaini, uye tekinoroji yekugadzirisa, mitengo yacho zvakare yakasiyana, uye quotation inoenderana nezvinodiwa chaizvo.
Ndokumbira ubvunze: Kana uine samples, unogona kuzvigadzirisa.Kana uine mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuonana nevashandi vedu vekutengesa, tinogamuchira mibvunzo yese!
Zvakapfuura: SIUMAI Corrugated shipping mabhokisi tsika kurongedza zipper katoni makadhibhokisi bhokisi
Zvinotevera: CD bhokisi rekodhi rekodhi pepa CD DVD VCD chivharo bhokisi album